यस्ता छन् एप्पलले सार्वजनिक गरेको 'आइफोन–१३' सिरिजका स्मार्टफोन :: Setopati
यस्ता छन् एप्पलले सार्वजनिक गरेको 'आइफोन–१३' सिरिजका स्मार्टफोन
एजेन्सी क्यालिफोर्निया, भदौ ३०
मंगलबार राती आयोजना भएको ‘क्यालिफोर्निया स्ट्रिमिङ’ कार्यक्रममा एप्पलले आफ्नो नयाँ उपकरणहरु सार्वजनिक गरेको छ।
एप्पलले यस वर्ष आफ्नो स्मार्टफोनको सूचीमा ‘आइफोन–१३’ सिरिजका स्मार्टफोन थपेको छ। जसमा कम्पनीले नयाँ ‘आइफोन–१३’, ‘आइफोन–१३ मिनी’, ‘आइफोन–१३ प्रो’ र ‘आइफोन–१३ प्रो म्याक्स’ ल्याएको छ।
‘आइफोन–१३’का यी चार संस्करणका स्मार्टफोनमा यस्ता फिचर छन्,
६.१ इन्चको सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलइडी डिस्प्ले भएको नयाँ ‘आइफोन–१३’मा १२०० निट्सको स्क्रिन ब्राइटनेस छ। यसको अगाडिको भागमा ‘सेरामिक शिल्ड’ प्रविधिको ग्लास हालिएको छ। यो ग्लास अरु स्मार्टफोनमा प्रयोग हुने ग्लासभन्दा चार गुणा बलियो भएको कम्पनीको दाबी छ।
यसको कुल लम्बाई ५.७८ इन्च छ भने चौडाइ २.८२ इन्चको छ। यो ०.३० इन्च मोटो छ। यसको तौल जम्मा १७४ ग्राम भएको कम्पनीले जनाएको छ।
‘आइफोन–१३’मा ए–१५ बायोनिक चिप्स छ। क्यामरामा भने यसमा दुईवटा क्यामरा पाउन सकिन्छ, जसमा १२ मेगापिक्सलको वाइड क्यामरा र १२ मेगापिक्सलको अल्ट्रा–वाइड क्यामरा छ। यसको सेल्फी क्यामरा पनि १२ मेगापिक्सलको छ।
यो आइफोनमा प्रयोगकर्ताले आइओएस १५ संस्करण पाउन सक्छन्। ‘आइफोन–१३’ ६ जिबी र्याममा १२८ जिबी, २५६ जिबी र ५१२ जिबी आन्तरिक स्टोरेजको विकल्पको साथ आएको छ। यो पाँच रङमा उपलब्ध छ -रातो, सेतो, कालो, निलो र गुलाबी।
यससँगै नयाँ आइफोनको ब्याट्री १९ घण्टासम्म चल्ने बताइएको छ। यसमा २० वाटको फास्ट चार्जिङ छ। ब्याट्रीको सुरक्षाको लागि एप्पलले १५ वाटको म्यागसेफ वायरलेस चार्जिङपनि ल्याएको छ।
फेस आइडी फिचर भएको यो आइफोन पानी र धुलो प्रतिरोधी पनि छ।
‘आइफोन–१३’को मूल्य सात सय ९९ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुनेछ।
५.४ इन्चको सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलइडी डिस्प्ले भएको ‘आइफोन–१३ मिनी’मा पनि १२०० निट्सको स्क्रिन ब्राइटनेस छ। यसको अगाडीको भागमा ‘सेरामिक शिल्ड’ प्रविधिको ग्लास हालिएको छ।
यसको कुल लम्बाई ५.१८ इन्च छ भने चौडाइ २.५३ इन्चको छ। यो ०.३० इन्च मोटो छ। यसको तौल जम्मा १४१ ग्राम छ। ‘आइफोन–१३’ सिरिजका स्मार्टफोनमध्ये ‘आइफोन–१३ मिनी’ सबैभन्दा सानो र हलुका फोनमा पर्छ।
आइओएस १५ संस्करण भएको यो आइफोन पनि पानी र धुलो प्रतिरोधी छ।
रातो, सेतो, कालो, निलो र गुलाबी रङमा उपलब्ध हुने ‘आइफोन–१३ मिनी’को मूल्य ६ सय ९९ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुन्छ।
‘आइफोन–१३ प्रो’मा ६.१ इन्चको सुपर रेटिना एक्सडीआर अल-स्क्रिन ओएलइडी डिस्प्ले छ। कम्पनीले यसमा प्रोमोसन प्रविधि ल्याएको छ, जसमा १२० हर्जको रिफ्रेस रेट छ।
यसको कुल लम्बाई ५.७८ इन्च छ भने चौडाइ २.८२ इन्चको छ। यो ०.३० इन्च मोटो छ। यसको तौल जम्मा २०४ ग्राम भएको कम्पनीले जनाएको छ।
ए-१५ बायोनिक चिप्स भएको ‘आइफोन–१३ प्रो’मा तीनवटा क्यामरा छ, जसमा १२ मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामरा, १२ मेगापिक्सलको वाइड क्यामरा र १२ मेगापिक्सलको अल्ट्रा–वाइड क्यामरा छ। यसमा १२ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा छ।
यसपटक एप्पलले आफ्नो प्रो लाइनअपका स्मार्टफोनमा एक टिबीसम्मको स्टोरेज ल्याएको छ। यसका साथै ‘आइफोन–१३ प्रो’ १२८ जिबी, २५६ जिबी र ५१२ जिबी आन्तरिक स्टोरेजमा उपलब्ध छ।
यो आइफोन चार नयाँ रङमा आएको छ -कालो, गुलाबी, सेतो र निलो। ‘आइफोन–१३ प्रो’को मूल्य ९ सय ९९ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुन्छ।
‘आइफोन–१३ प्रो म्याक्स’
‘आइफोन–१३ प्रो म्याक्स’ ‘आइफोन–१३’ सिरिजको प्रिमियम फोनमा पर्छ। यसमा ६.७ इन्चको सुपर रेटिना एक्सडीआर अल–स्क्रिन ओएलइडी डिस्प्ले छ। कम्पनीले यसमा पनि प्रोमोसन प्रविधि ल्याएको छ, जसमा १२० हर्जको रिफ्रेस रेट छ।
यसको कुल लम्बाई ६.३३ इन्च छ भने चौडाइ ३.०७ इन्चको छ। यो ०.३० इन्च मोटो छ। यसको तौल जम्मा २४० ग्राम भएको कम्पनीले जनाएको छ।
‘आइफोन–१३ प्रो म्याक्स’मा ए–१५ बायोनिक चिप्स छ। यसमा पनि तीनवटा क्यामरा छ, जसमा १२ मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामरा, १२ मेगापिक्सलको वाइड क्यामरा र १२ मेगापिक्सलको अल्ट्रा–वाइड क्यामरा छ। यसको अगाडि १२ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा छ।
यो आइफोनमा एक टिबीसम्म स्टोरेज पाउन सकिन्छ। यसका साथै यो १२८ जिबी, २५६ जिबी र ५१२ जिबी आन्तरिक स्टोरेजमा उपलब्ध छ।
यो आइफोन चार नयाँ रङमा आएको छ -कालो, गुलाबी, सेतो र निलो। ‘आइफोन–१३ प्रो म्याक्स’को मूल्य १ हजार ९ सय ९९ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ३०, २०७८, १३:१७:००
एप्पलले अब मिनी आइफोन उत्पादन नगर्ने!
गुगलले झन्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ खर्चेर न्युयोर्कमा किन्ने भयो अफिस
भारतमा ओपोको नयाँ स्मार्टफोन ‘ए–१६’ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर
रियलमीका चार नयाँ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा
कस्तो छ २९ हजारमा पाइने रियलमी–८ स्मार्टफोन? (भिडिओ रिभ्यु)
आइफोन, एप्पल वाच र एयरपड एकैपटक चार्ज गर्न मिल्ने चार्जर